[Isigqibo esongezelelweyo sentengiso! ] IKojiro Oka Musical Concert 2021 | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
[Isigqibo esongezelelweyo sentengiso! ]IKonsathi yoMculo yaseKojiro Oka 2021
[Isigqibo esongezelelweyo sentengiso! ]IKonsathi yoMculo yaseKojiro Oka 2021 "Eyona Mculo"
[Isigqibo esongezelelweyo sentengiso! ] Ngokurhoxiswa kwemo yequbuliso, siyakuthengisa izihlalo ezongezelelekileyo ebeziphelile.
Umhla wokukhutshwa: Okthobha 2021, 10 (NgoLwesihlanu) 15: 10-
U-Kojiro Oka, inkwenkwezi kwihlabathi lomculo waseJapan.
Siza kwamkela iindwendwe kwaye sicule i-gem yenombolo yomculo.
Nceda wonwabe ngexesha lokonwaba xa unxilile ngelizwi elimnandi lokucula.
* Isihlalo esinye siza kuthengiswa kwindawo yokuhlala yesiqhelo (ngaphandle komqolo ongaphambili kunye nezinye izihlalo) ngaphandle kokushiya isitulo esinye ngaphambili, ngasemva, ngasekhohlo nasekunene.
Ngomhla we-2021 kuDisemba ngo-12 (ngoLwesihlanu)
18:30 ukuqala (17:30 ivulekile)
"Yonke into endiyicelayo kuwe (AL Webber)" evela kwi "Phantom yeOpera"
"Ngokuhlwanje (L. Bernstein)" kunye nabanye abavela kwi "Side Side Story"
Undwendwe: Hiroko Kouda
I-OKA Ensemble ekhethekileyo
Umhla wokukhutshwa: Epreli 2021, 9 (NgoLwesithathu) 15: 10-
Umhla wokukhutshwa okongeziweyo: Okthobha 2021, 10 (NgoLwesihlanu) 15: 10-
Isihlalo se-SS i-8,500 yen
S isihlalo sama-7,500 yen
Isihlalo sama-6,000 yen
B isihlalo se-4,500 yen
C uhlala kwi-3,000 yen
UKojiro Oka (umdlali weqonga, umvelisi)
Uzalelwe kwisithili saseFukuoka.Wongiwe ngesiTshayina eyunivesithi.Emva kwexesha, wayethathe inxaxheba kwiNkampani yeShiki Theatre njengelungu lonyaka. Kwi-1994, waphicothwa indima ye-Enjolras kwi "Les Miserables" kwaye wenza umtsi wokuqhubela phambili ukuba abe yinkwenkwezi yomculo ngenkangeleko yakhe entle kunye nokukwazi kwakhe ukucula. Ukusukela ngo-2003, wadlala indima kaJavert kwakuloo msebenzi mnye kwaye wathatha inxaxheba kwi- "Les Miserables" iminyaka eli-17.Ukongeza kwimimculo, wenza ngamandla ukudlala ngokuthe ngqo, iTV (idrama ye-NHK Taiga "Yoshitsune", njl. I-CD ikhuphe i "Love Collection", "Umthandazo" kunye ne "Best of Musical" njengee-albhamu ezizodwa.Ukongeza, ethatha ithuba likaMiss Saigon, wasungula i "Miss Saigon Fund" kwaye unomdla kwimisebenzi yamavolontiya.Undwendwela iYunivesithi yaseKyushu Otani.
UHiroko Kouda (isoprano)
Abaphumelele kwiDyunivesithi yaseTokyo yezobuGcisa.Emva kokusebenza kwisikolo esifanayo kunye ne-Opera Training Institute ye-Arhente yeMicimbi yeNkcubeko, yafudukela eItali.Emva kokuphumelela inqanaba eliphezulu kukhuphiswano lwamazwe aphesheya, ebesebenza kwiRome Opera House, eStuttgart State Theatre, njl.njl.Emva kokubuyela eJapan, wabonakala kwiNew National Theatre "The Tales of Hoffmann", "Rokumeikan", Lake Biwa Hall "Rigoletto", Nikikai "The Magic Flute", "Der Rosenkavalier", kunye ne "Puritan".Ukongeza kwiingoma kunye neekonsathi zeokhestra kwilizwe liphela, uphuhlisa imisebenzi eyahlukeneyo enje ngobuntu be-NHK-FM "Umculo weklasikhi ngokuthanda" kunye noMC kwi-BS Fuji "Recipe Ann". Kwi-2018, ukukhumbula isikhumbuzo se-10 se-CD yokuqala, "I-ARIA Hana iya eHana-Opera Aria Masterpieces" iya kukhutshwa, kwaye ngo-2020, "iKono Michi-Japanese Song II-" iya kukhutshwa.Ndifumene i-14 ye-Goshima yeSikhumbuzo seNkcubeko yeMbasa ye-Opera iNew Face Award kunye ne-Exthon Music Music Award ye-Award Music Award ye-Award.Ummeli we-38 weenqanawa zokuhamba ngeenqanawa (i-Ambass yokuKhuthaza ukuhamba ngenqanawa). Imiselwe ukuba inkwenkwezi kwiseshoni yesibini "Die Fledermaus" Rosalinde ngoNovemba 3 kunye neNkosazana Kaguya e "Taketori Monogatari" kwiHolo yeLake Biwa ngoJanuwari 2021.Ilungu leNikikai.